How to Boost Self-Esteem & Self-Confidence by Shop App MM
Beauty, Beauty, Health, Lifestyle, Lifestyle, Sports
Self-Esteem နဲ့ Self-Confidence ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ?0514
The KaungHtet January 4, 2022 5:17 am January 24, 2022
• မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု – Self-Esteem
• မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု – Self-Confidence
ခုနှစ် “၂၀၂၁” ကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ကျရှုံးမှုတွေ၊ ပြန်လည်အားတင်းထားမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊‌ အောင်မြင်မှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျများစွာနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ သုံးသပ်ရင်း “၂၀၂၂” ကို အကာင်းဆုံးဗားရှင်းအသစ်နဲ့ စတင်ချင်တဲ့စိတ်က လူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပဲမဟုတ်လား?
ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ အချိန်တွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုလို့ခေါ်တဲ့ [Self-Esteem] နဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တဲ့ [Self-Confidence] တို့ကို ပြန်လည်အဖက်ဆယ်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ဆို နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစက အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းနဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်းက မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်ခွင်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရုံသာမက ‌မိမိ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ပါ ကောင်းကျိုးများရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ .. ဒါဆိုအခုပဲ ဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
🔸 သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသားအရေအတွက်လိုအပ်မယ့် ဖြည့်စွက်စာများကိုစားသုံးပေးခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေပြီး ယုံကြည်မှုတိုးစေမှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop App MM တွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသားအရေအတွက်ကောင်းကျိုးများစွာပြုပေးမယ့် Supplement များကို ဒီလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် [Multivitamins]
🔸 မိမိကိုယ်ကို ကြင်နာပါ။
🔸 မှန်ကြည့်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းမွန်သောစကားလုံးများဖြင့် ချီးကျူးပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနေ့စဉ်ပြုလုပ်ခြင်းကလည်း ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ရာတွင်အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူ ယုံကြည်မှုလည်း တစ်ပါတည်း မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာ သုတေသီများမှဖော်ပြထားပါတယ်။
Shop App MM တွင် လေ့ကျင်းခန်းပြုရာတွင် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းများကို ဒီလင့်ခ်များတွင် [Yoga] [Gyms] ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါပြီ။
🔸 အကြောက်တရားကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
🔸 အကောင်းမြင်ဝါဒပွားများသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ပါ။
🔸 အဆိုးထဲကအကောင်းမြင်နိုင်အောင် တတ်နိုင်သမျှလေ့ကျင့်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါ
မှောင်မိုက်နေသောတိမ်တိုက်များကြား ထွက်ပေါ်လာသော ရောင်ခြည်လင်းတန်း “Silver Lining” ကိုရှာဖွေပြီး ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းကလည်း မိမိရဲ့ ဖြစ်တည်မှုနဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုမိုလက်ခံသိတတ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဆိုခြင်း၊ ဟင်းချက်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း .. အစရှိတဲ့ မိမိခံစားချက်ကိုကောင်းမွန်စေမယ့်အရာများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်း မိမိကိုယ်မိမိတန်ဖိုးထားရာရောက်ပြီး ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေမှာအမှန်ပါပဲ။
Shop App MM က မိမိရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ပံ့ပိုးပေးနေမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်များစွာကိုလည်း ပစ္စည်းပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အွန်လိုင်းရှော့ပင်ပလက်ဖောင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
“Nobody is Perfect,
Remember that everyone makes mistakes”
ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မမွေးဖွားသေးပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက်တွေရှိသလို အားသာချက်တွေလည်း ကိုယ်ရှိကြပါတယ်။
မိမိရဲ့ အားသာချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်နဲ့ မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီး တန်ဖိုးထားနိုင်ကြသူများဖြစ်ပါစေလို့ Shop MM မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous ArticleValentine’s Day: Love Is In The AirNext ArticleNew Year, New Recipes – Burmese Cuisines